IJuniper Ridge Cottage - I-Airbnb
IJuniper Ridge Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBarbara
UBarbara ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
I-Cottage yi-625 sq ft kwaye yakhiwa ngo-2015. Ikunika indawo ecocekileyo yokuphumla emva kosuku lwemisebenzi yangaphandle. Iveranda yangaphambili inombono omangalisayo wentlambo yasePrineville kunye nokutshona kwelanga okuphefumlayo!
Indlu yethu yangasese inikezela ngobusuku obuzolileyo kwindawo yelizwe. Sifumaneka kwiikhilomitha ezili-10 ukusuka ePrineville kunye neekhilomitha ezi-5 kuphela ukusuka kwi-Prineville Reservoir. Indalo ilungile ngaphandle komnyango wakho wangaphambili kunye neehektare ezingama-84 zomhlaba weBLM osecaleni kweNkotshana. Uyakonwabela ukujonga inkwenkwezi ngokuhlwa emva kokuba uphumle malunga ne-Fire Pit nge-S'mores.
Iindwendwe zinegas yazo yeBBQ grill kunye nendawo yetafile yepikiniki, equka iqula lomlilo elineenkuni. I-Keurig iyafumaneka kwaye sibonelela ngeentlobo ngeentlobo zekofu kunye neziselo. Ngaphandle kwe-BBQ, sine-microwave, i-oven yetoaster, ipleyiti eshushu, imbiza yokutyela kunye ne-waffle iron oza kuyisebenzisa ekulungiseleleni ukutya kwakho.
I-Wifi iyafumaneka kunye neRoku, ukuze ungene kwaye ubukele usebenzisa iNetflix okanye iakhawunti yeAmazon. Indlu encinci ineeDVD ezingaphezu kwe-120 onokuthi ukhethe kuzo.
Imisebenzi ekhoyo kwindawo ejikelezileyo...
Ukuhamba ngeenqanawa, i-Skiing yamanzi okanye ukuloba kwi-Prineville kunye ne-Ochoco Reservoirs, tyelela i-Painted Hills, i-Hiking, i-OHV imizila, i-Hiking & Sightseeing kwi-Crooked River Canyon, i-Rock Climbing e-Smith Rocks, eMtn. Ukukhwela ibhayisekile, ukuHamba ngeBhayisekile eziNdleleni, ukuFota okanye iZilwanyana zasendle & nokuBukela iiNtaka.
IPrineville Reservoir kunye nomhlaba weBLM
Siyakonwabela ukutyelela neendwendwe zethu, kodwa siyalihlonipha ixesha labucala. Sihlala kwipropathi kwaye siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nemisebenzi ekhoyo kule ndawo imangalisayo nentle yaseOregon.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Prineville